ကလေးမိဘရင်ကျိုး! တနိုင်ငံတည်းသားမာဖီးယားက အသက် ၁၂ နှစ်သမီးကို ခိုးယူပြီး ၅ ရက်ကြာအဓမ္မပြုကျင့် – Myanmar Live
တစ်နိုင်ငံတည်းသား မာဖီးယားတစ်ဦးက အသက် ၁၂ ရှိမိန်းကလေးကိုခိုးယူပြီး ၅ ရက်ကြာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ပြီး နောက် ရထားဘူတာတစ်ခုတွင်စွန့်ပစ်ထားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကလေးမိဘနှစ်ဦးစလုံး ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ရပြီး တရားခံသည် အခြားမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကိုလည်း ထို့နည်းတူစော်ကားခဲ့ဖူးသည်ဟု သိရသည်။
တစ်နိုင်ငံတည်းသားဖြစ်သည့် မာဖီးယားတစ်ဦးဖြစ်သူ အသက် ၃၅ နှစ်ရှိ ဇော်ဦး ဆိုသူသည် အလုပ်ရှာပေးမည် ဟု လိမ်မည်ခေါ်ဆောင်သွားပြီး အသက် ၁၂ ရှိမိန်းကလေးအား တခြားနယ်ရှိအလုပ်သမားတန်းလျားတစ်ခု တွင်ချုပ်နှောင်ထားကာ ၅ ရက်ကြာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ထို့နောက် မိန်းကလေးငယ်အား ချွမ်ဖော်ခရိုင်ရှိ ပါတကိုရထားဘူတာတွင် လာရောက်စွန့်ပစ်သွားခဲ့သည်။ မိဘများက လိုက်လံရှာဖွေရာမှ အဆို ပါမီးရထားဘူးတာတွင်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်တိုင်ကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ပါမီးရထားဘူးတာတွင်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်တိုင်ကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဇော်ဦးဆိုသူသည် ယခင်ကလည်း ယခုမိန်းကလေးငယ်နှင့်သက်တူရွယ်တူရှိသည့် မြန်မာအသိတစ်ဦး၏သမီး ကို ကာမစော်ကားခဲ့ဖူးသည်ဟု သိရသည်။ တရားခံသည် ထိုင်းရဲဘာသာပြန်ဖြစ်၍ ဖမ်းဆီးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်း ကြောင့်မိဘများက အမှုမဖွင့်ဘဲ နှုတ်ပိတ်နေခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဇော်ဦးကို အတင့်ရဲစေပြီး မြန်မာ အမျိုးသမီးများကို တောက်လျှောက်အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ယင်းသံသယတရားခံကို တရားဥပဒေ နှင့်အညီ ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ထိုင်းရဲများက လိုက်လံဖမ်းဆီးနေသည်ဟု သိရသည်။
ဓာတ်ပုံနှင့်အချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : thairath , thaipost
Previous Article အသားစိမ်းငါးစိမ်းစားကြလေ့ရှိတဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေကို ကပ်ပါးရောဂါသုတေသနဌာနမှသတိပေး !
Next Article ၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၁-၇ ရက်ထိ